Archive du 20181009
Marc Ravalomanana Horaisintsika an-tanana ny firenena
Niainga tetsy amin’ny foiben-toerana na ny QG tetsy Bel’air Ampandrana ny propagandin’i Marc Ravalomanana, kandida laharana faha-25 omaly,
Depiote Hary Andrianarivo Filohan’ny antenimieram-pirenena vonjimaika
Tsy maintsy niala tamin’ny toerana amin’ny maha filohan’ny Antenimieram-pirenena azy i Jean Max Rakotomamonjy noho izy nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena.
Diaspora avy any Eoropa Tonga hampandresy an-dRavalo
Tonga an-tanindrazana ny ankamaroan’ireo Malagasy mpila ravinahitra any ampitan-dranomasina na ny Diaspora mivondrona ao anatin'ny KMMR Eoropa amin’izao fotoana.
Solontenam-panjakana manao fampielezan-kevitra Mety hiafara amin’ny fanagadrana mihitsy
Nisokatra omaly ny fampielezan-kevitra ary hifarana amin’ny 6 novambra amin’ny 12 ora alina.
Fiatombohan’ny fampielezan-kevitra Hafa raha samy hafa
Hatramin’izay naha tany ny tany angamba dia sambany no nisy toy izao eto amintsika izao.
Imbiky Herilaza “Mikorontana ny fizotran`ny fifidianana”
Raha fifidianana milamina sy manaraka ny fenitra demokratika rehetra dia raha dinihana, tsy feno izany fepetra izany. Mikorontana daholo ny tsy fifehezana ny fifandraisana sy fifanajana amin`ny samy fifidianana.
KMMR Moramanga Vonona hampandany 1er tour de vita ny kandida n°25
Toy ny tany amin’ny faritra samihafa manerana ny nosy dia fiombonam-bavaka niraisana notontosaina tao amin’ny Tiko
Filankevi-panjakana sy tribonaly misahana ny ady heloka Dinihina manokana ny momba azy
Notontosaina tetsy amin’ny Motel Anosy omaly ny atrikasa fandinihana manokana ny fihodin’ny tribonaly misahana ny ady heloka (tribunal administrative) sy ny filankevi-panjakana (conseil d’Etat) eto amintsika.
Resaka elikoptera Manazava ny tale jeneralin’ny ACM
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly alatsinainy 8 oktobra ny tale jeneralin’ny Aviation Civile de Madagascar Atoa Andrianalison James manoloana ny resabe mandeha mikasika azy ireo ny amin’ny tsy namoahana alalana hahafahan’ireo angidimby miisa valo
Baolina kitra Malagasy Hanomboka ny 01 desambra 2018 ny taom-pilalaovana vaovao
Nambaran’ny filohan’ny Federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra, Andriamiasasoa Doda, teny Mahamasina taorianan’ny famaranana ny Telma Coupe de Madagascar 2018 ny alahady 7 oktobra teo fa hanomboka amin’ny 01 desambra 2018 izao ny taom-pilalaovana eo amin’ny taranja baolina kitra Malagasy.
Championnats nationaux du Sport Scolaire 2018 Mbola nanjakan’ny DREN Atsimo Andrefana indray
Mbola nanjakan’ny DREN Atsimo Andrefana toy ny tamin’ny andiany voalohany notontosaina tany Mahajanga indray ny fifaninanana nasionaly fiadiana ny Tompondakan’ny Fanatanjahantena an-tsekoly
Lalao Fitaizam-batan’ny mpiasam-panjakana “Asief” Any Antsiranana no hanatanterahana ny andiany faharoa
Nikatona tamin’ny lanonana fizarana an’ireo medaly sy amboaran’ireo nandresy tao amin’ny Foyer des Jeunes Cité Canada tamin’ny sabotsy 6 oktobra teo ny lalao fitaizam-batan’ny mpiasam-panjakana “Asief”
« Misaotra tompoko ! »
« Raha misy manome zavatra ho anao, kingà miteny hoe misaotra tompoko ! », hoy ny tsianjerin’ny ankizy sy ny zaza.
Faribolan’ny mpandalina ny hary Vonona hiara-kiasa amin’ireo kandida 36
Nampahafantarina omaly alatsinainy 8 oktobra tetsy amin’ny Bistrot Antsahavola ny boky mirakitra ireo fehin-kevitra tapaka tao anatin’ilay loabary an-dasy nijeren-dry zareo avy eo anivon’ny faribolan’ny mpandalina ny hary eto Madagasikara (CREM)
Iniah sy Allkiniah Hampirevy amin’ny « Seho Rock maro loko »
Efa betsaka ny tanora tia sy mirona amin’ny mozika rock eto Madagasikara.
Olona roa no matin'ny toaka tao anatin'ny andro iray. Ny alahady teo no hita ny vatana mangatsiakan'izy ireo ka ny voalohany dia tetsy Masindray ary ny faharoa tetsy Ambohimanga-Rova.
Tsy hay intsony na vokatr’ilay isan’izy ireo be loatra na inona fa dia toy ny tsy ampy intsony ny isan’ireo fiara azo hanaovana fampielezan-kevitra satria dia kandida 2 samihafa omaly no nahitana peta-drindrina tamina fiara tokana. Hafakely mihitsy ity fotoam-pifidianana indray mitoraka ity.
Hihazo an'i Guinée Equatoriale anio amin'ny 11 ora alina ao Paris (00h eto Madagasikara)
Mpivarotra eny amin’ny cité Mahamasina Hafindra eny Namontana
Nihaona mivantana tamin’ny delegen’ny Boriborintany fahefatra omaly ireo mpivarotra amoron-dalana nesorina tetsy amin’ny cité Mahamasina ny herinandro teo.
CNaPS - FLM Vohipeno An-jatony ireo mpianatra ao amin’ny SEFAFI nahazo fiofanana
Seha-pamokarana lehibe fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fambolena sy ny fiompiana izay hiantsorohan’ny 80%-n’ny Malagasy.